Mbudzi Simulator: Tsvina yeNzvimbo inouya kuApp Store | IPhone nhau
Kune akawanda simulator-mhando mitambo, asi panongova nembudzi imwe chete simulator, kana tsime, saga inonzi Goat Simulator. Mitambo yembudzi iyi yakapenga yakafarira kubudirira kukuru kubvira payakaburitswa vhezheni yavo, uye icho chinofanira kuve chikonzero nei Kofi Stain Studios yanga isingade kuuraya huku inokandira mazai egoridhe uye yasarudza kuvhura mutambo mutsva: Mbudzi Simulator: Tsvina yeNzvimbo.
Sezvatinoverenga muApp Store, mushure memutambo wekutanga uye zombie apocalypse hapana zvakawanda zvakasara kuti zviitwe pasi pano, saka vafunga kuvhura yakakurumbira mbudzi nerurimi rurefu muchadenga. Uye kwete izvo chete, asi chii chinonzi Mbudzi iya inotyaira zvikepeHatina kukwanisa kutarisira kushoma kubva kumbudzi yekutanga mbudzi, isu? Chimwe chezvinangwa muGoat Simulator: Waste of Space ndeye "Kumhanyisa mhomho yekuunganidza vanhu kuti vagadzire yakakosha koloni uye kuti vamwe vanhu varibhadhare uye vaite basa rese." Chii chingakanganise?
Chitsva chitsva cheGoat Simulator saga
Ini, uyo asiri mutsigiri mukuru wemitambo yeMbudzi Simulator, ndinoona chikamu chitsva ichi sechinhu chinonakidza kupfuura mitambo yapfuura. Chii chinoitika ndechekuti its not high mutengo we € 4.99 Zvinogona kudhura kana isu tisiri kuzotamba zita remusoro zvakanyanya. Kune rimwe divi, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti Waste of Space inongowanikwa chete kune zvigadzirwa kubva muna 2011 zvichienda mberi, zvinova iyo iPhone 4S, iyo iPad 2 uye yechishanu chizvarwa iPod Touch. Kana iwe ukafunga kurodha pasi uye uve wekutanga nzvimbo mbudzi munhoroondo, usazeze kupindura pane zvaunofunga nezvemutambo uyu uye nemabatiro auri kuita kunze kwevhu.
Mbudzi Simulator kutambisa Space7,99 €
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IPhone mitambo » Mbudzi Simulator: Tsvina yeNzvimbo, mutambo mutsva nezve mbudzi ine mukurumbira inouya kuApp Store
Chimwe chirongwa chinosimbisa iyo iPhone 7 Plus ine Smart Connector; saizi yakafanana ne6s